fampitandremana: Hadisoana raha nandefa ny pake QUERY. PID = 831 ao /home/admin/web/info-all.com/public_html/wp-includes/wp-db.php amin'ny tsipika 2056
Linguistics | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Ahoana no ahafahanao mandika amin'ny fiteny Okrainiana amin'ny fiteny Rosiana Gilyak?
ahoana ny fandikana ny gilyak amin'ny teny rosiana? Glyaka - amin'ny fandikana Rosiana "gilyaka". Sampana misy tovana toa ny Rosiana -isch amin'ny teny hoe "boot". Tsy misy teny toy izany amin'ny teny rosiana. Dictionary ...
Fitsipika fototra amin'ny sora-bolana amin'ny sazy sarotra sy sarotra?
Fitsipika fototra momba ny fametrahana mari-piatoana amin'ny fehezanteny sarotra sy sarotra? misy boky fampianarana FRY, fizarana SYNTAX fehezanteny sarotra SSP (fitambarana), fandaminana ny koma. Manampy: 1) Eo anelanelan'ny ampahany amin'ny SSP misy fifandraisana, mifanohitra ary manasaraka ...
Ny fomba hanavahana ny endrika tonga lafatra amin'ny matoanteny tsy lavorary
ahoana no hanavahana ny endrika tonga lafatra amin'ny matoanteny amin'ny tsy tonga lafatra Ny endrika tonga lafatra amin'ny matoanteny mamaly ny fanontaniana: inona no hatao?, ary ilay tsy tanteraka: inona no hatao? Paiso mora! Ny endrika tonga lafatra amin'ny matoanteny mamaly ny fanontaniana ny zavatra tokony hatao, fa ...
Lisitry ny sarimihetsika amin'ny teny Anglisy. Arakaraka ny tsara kokoa. Amin'ny teny anglisy miaraka amin'ny dikanteny
Tanisao ny karazana sarimihetsika amin'ny teny anglisy. Ny lehibe kokoa, ny tsara kokoa. Amin'ny teny anglisy miaraka amin'ny fandikan-teny kjk ny tsirairay dia afaka misafidy ny karazana sarimihetsika tiany indrindra. Misy karazana karazana sarimihetsika asongadina ...
Seme sy Sem Inona izany? Hazavao azafady, azafady, amin'ny ohatra iray manokana.
Seme sy semema Inona izany? Azafady mba hazavao amin'ny ohatra manokana. Sememe, na semantheme (avy amin'ny teny grika. Ilazako; ny teny dia miorina amin'ny fampitahana amin'ny teny hoe fonem, morpheme) singa iray amin'ny drafitry ny atiny amin'ny fiteny, ...
Inona ny toerana tsy mitovy amin'ny toerana?
inona no tsy itovizan'ny toerana amin'ny toerana? Iray aiza, ary iray hafa ary ahoana. Ny 1 dia ahy matetika ary ny 2 dia zavatra lafy iray. Andao hojerentsika ny rojo sy ny valiny: azo ovaina ve ireo teny ireo: Big ...
araky ny lalàna iza no marina "manomboka amin'ny rubles fitopolo", fa tsy "amin'ny fiton-jato"?
araky ny lalàna iza no marina "manomboka amin'ny rubles fitopolo", fa tsy "amin'ny fiton-jato"? Soloy ny teny hoe zato- amin'ny teny hoe "naoty" dia azo antoka fa tsy ho diso ianao! Avy amin'ny naoty fito- avy amin'ny fiton-jato Eto dia mihatra ny fitsipiky ny fandavana isa. Right ...
Ahoana no ahamariny: "miandry valiny" na "miandry valiny"? Izany hoe "miandry inona" na "miandry inona"?
Ahoana no ahamariny: "miandry valiny" na "miandry valiny"? Izany hoe "miandry inona" na "miandry inona"? Mihevitra aho fa azo ekena ihany ... Ny matoanteny "miandry" dia mifanaraka amin'ny tranga fiampangana na fototarazo. Samy hafa ...
Marina ve fa mitovy amin'ny Rosiana ny Sanskrit?
Marina ve fa ny Sanskrit dia mitovy amin'ny Rosiana? Marina. Saingy misy fiteny eropeana mitovy kokoa amin'ny sanskrit fa tsy amin'ny rosiana. Ireo dia, ohatra, Gypsy sy Ossetian. Iraniana (Farsi) sy Afghan (pashtu) ...
Tulle, voil - karazana inona?
Tulle, voil - karazana inona? tulle-male veil-vavy Ny teny sasany dia manova ny lahy sy ny vavy rehefa mandeha ny fotoana. Ohatra anarana. Ny _shadow_ dia lahy indray mandeha, noho izany ny endrika mihena _shadow_. _Café_ dia indray _café_ - lahy ...
Fanontaniana mahamenatra ao anatiny
Fanontaniana mahamenatra ao anatiny Avelao aho hiezaka hanazava aminao. ... Alao an-tsaina izany amin'ny 8:00 maraina. Midika izany fa 8 ora katroka tamin'io andro io no lasa. Ary manomboka ny ora fahasivy. Ary izao…
Ampio aho hahita synonyms for: 1 roboka mahery 2 mahery lehilahy 3 mahery frost 4 mafy namana
manampy amin'ny fisafidianana synonyma ho an'ny: tavy matanjaka 1 2 olona matanjaka 3 fanala matanjaka 4 fisakaizana matanjaka 1) lamba matanjaka, 2) olona salama, 3) fahamasinana mangatsiaka, 4) lamba fisakaizana tsara - olona matanjaka lamba mafy ...
p_dkazhіt yak v_dredaguvati teny amin'ny ukr. movі
teny pidkazhit yak vidredaguvati amin'ny Okrainiana. Movi Nevrno vikonuyuchy obov * fitenin'ny sekretera Keruyuchy fitotonganana eo amin'ny dumka dia misy famotsoran-keloka mazava .... raiso ny chiys bk (lahatsoratra amin'ny ...) esory ny mpandray anjara feno fankasitrahana rstrata ao amin'ny zvdsi mandehana any uklasti ...
Belarus, Belarus, Belarus? Ahoana no ahamariny? Entana belarosiana sa belarosiana? Bélarus ve ilay olona sa belarosiana?
Belarus, Belarus, Belarus? Ahoana no ahamariny? Entana belarosiana sa belarosiana? Bélarus ve ilay olona sa belarosiana? Amin'ny teny Rosiana, tsy ny teny Belarus ihany no iharan'ny fandikan-teny, fa ny foto-kevitry ny olona ao amin'ity ...
Ahoana no fijerin'ny Erzyana tsy mitovy amin'ny mokshan? Ahoana ny fahasamihafan'ny fiteny? m b fampitahana vitsivitsy
Ahoana ny fomba fijerin'ny Erzyans amin'ny Mokshans? Inona no tsy itovizan'ny fiteny? m. b. karazana fampitahana Victoria, eto, horosohy, misy koa ny latabatra misy tsy fitovizan'ny teny: http://www.cigankin.ru/archives/581 Mostly Mordovians ...
Alemà. Rahoviana izy ireo no ampiasaina ary inona no tsy mampiavaka ny tsy, na, na inona na inona?
Alemà. Rahoviana no ampiasaina izy ireo ary inona no maha samy hafa ny nicht, kein, nichts? nicht - tsy kein - tsy misy nichts - tsy misy Ireny dia fomba fanehoana fandavana. Tsy azonao an-tsaina ny fahasarotako eto ...
Ny anarana Ramil izay mifanaraka. Anarana Tatar io
Ny anarana Ramil no dikan'izany. Ity dia anarana tatar. Ny anarana Ramil, nadika avy amin'ny teny Arabo, dia midika hoe majika, mahafinaritra, mahagaga. Amin'ny teny Arabo, ny raml dia midika hoe faminaniana amin'ny fasika, ...
Maninona ny "tsy meloka" no misaraka foana, fa ny "tsy manan-tsiny" matetika miaraka?!
Maninona ny "tsy meloka" no misaraka foana, ary "tsy manan-tsiny" matetika miaraka?! .. ary ny "tsy" miaraka amin'ny verba dia soratana misaraka 🙂 fa amin'ny ankapobeny dia mila mamaky ianao satria ny "tsy" dia soratana miaraka amin'ny adjectives, partitions, adjectives fohy ...
Anarana iombonana amin'ny teny estoniana Tsy misy mpampianatra teny ao an-tanàna, saingy tsy mahafoy!
Ahoana ny fomba hianaranao estonianina samirery? Tsy misy mpampianara fiteny eto an-tanàna, saingy tsy milavo lefona izahay! http://www.eki.ee/books/ekk09/ http://langust.ru/news/16_10_12.shtml http://openlanguage.ru/inform/inslozhnye_jazyki_mira http://www.languages-study.com/ eesti-links.html http://www.eestikeel.ru/ https://site.google.com/site/eestikeelkool/ Mirary soa! Estoniana dia tsy fiteny sarotra be raha oharina amin'ny ...
Inona ilay hoe "Sitrapoko!" Alemà? ahoana no fomba fanoratana azy ary inona no dikan'izany?
Inona ilay hoe "Sitrapoko!" Alemà? ahoana no fomba fanoratana azy ary inona no dikan'izany? jawohl Ao amin'ny tafika - marina izany amin'ny fiainana tsotra - mazava ho azy, tena marina, marina tanteraka, mazava ho azy Ja wohl! ...
219 ny fangatahana mankany amin'ny tahiry, nateraka tao anatin'ny 1 segondra.